Mpisolovava - Hetra Vaovao
Mpisolovava — Hetra Vaovao
Lasa mpisolovava: rehefa avy nahazo ny diplaomany amin’ny Lalàna, ny iray amin’ireo izay azo atao fahafahana asa ho an’ny tanora nahazo diplaoma amin’ny Lalàna, dia azo antoka fa ny tena fahita, fa tsy ho izany tsotra kokoa, dia ny asa maha-mpisolovava. Ny asa ny mpisolovava raha ny tena izy izany no voafidy maro italiana kolejy nahazo diplaoma: araka ny angona farany, ao amin’ny Firenena, misy maro araka arivo ireo mpisolovava, isa avo be toy izany ny mahazo an’i Italia ny fahatelo-toerana ao Eoropa teo anivon ny Firenena, miaraka amin’ny mpisolovava.
Tsy ny fanjakana fanadinana no malaza sarotra, fa ny isan’ny mpahay lalàna ankehitriny ao amin’ny Firenena Mahafinaritra ho tena mifaninana amin’ny ny fanatanjahan-tena ny asa ara-dalàna ary, noho izany, ihany koa ny mety mahazo.
Tamin’izany fotoana izany, raha ny marina, ny eo ho eo ny vola miditra ny mpahay lalàna ao Italia dia manodidina ny fito amby telo-polo arivo euro
Fa raha ny nofiny dia ny ho lasa mpisolovava, na dia eo aza ny zava-tsarotra, ny teknika sy fomba fanao izay afaka hihaona ao an-toerana, no manome anareo amin’ny rehetra ny vaovao mahasoa ho an’ny naniry ny mpisolovava. Eto ny mpitari-dalana amin’ny fomba mba ho lasa mpisolovava: Ahoana no mba ho lasa mpisolovava: nahazo diplaoma oniversite, internship sy ny Fanjakana fandinihana ny Mpisolovava, nivoaka tamin’ny fomba Ofisialy Gazety ny vaovao mifanaraka amin’ny etika sy ny fitsipika momba ny fiainana manokana, toy ny nankatoavin’ny ny Mpiantoka. Notsorina ny vaovao fa Ahoana moa no ho lasa mpisolovava: torolalana ho mafy lalana andrasana mba ho afaka hanatanteraka ny asa ara-dalàna, ao anatin’izany ny Anjerimanontolo, fiofanako sy ny fandinihana ny Fidiram-bola ny hetra ny orinasa eo ny mpisolovava: inona ny toetra.
Ny vola miditra avy amin’ny asa-tena, na raharaham-barotra ny fidiram-bola
Eto dia ny fanapahan-kevitra ny sampan-draharaha ny hetra Bola varotra mpanampy sy ny fanelanelanana: ny Ministeran’ny Fitsarana dia nametraka ny hetra bola ho an’ny ny Tombony izany fitaovana ho an’ny mpahay lalana: ianao dia ho afaka ny manaiky ny fampiharana ny Raharaha Faty ao anatin’ny enina ambin’ny folo janoary taona. Ireto ny fepetra sy ampy fanononana tsy ampy ny Karama ny mpisolovava: ny Minisitry ny Fitsarana Andrea Orlando nanao sonia ny didim-panjakana momba ny vaovao masontsivana ny nanoritra fa dia hisolo